ထိုင်းမလေးရဲ. ကြည့်ရဆိုးတဲ့ ရုပ်သွင်ကို အကောင်းဆုံး ပြင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုလက်ရာ လူအများအံ့အားသင့်ကြရ | Buzzy
ထိုင်းမလေးရဲ. ကြည့်ရဆိုးတဲ့ ရုပ်သွင်ကို အကောင်းဆုံး ပြင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုလက်ရာ လူအများအံ့အားသင့်ကြရ
ဒီလူနဲ့ ဒီလူ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့်
တောင်ကိုရီးယားရဲ. နာမည်ကျော် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုလက်၇ာ တီဗီအစီအစဉ်တစ်ခုဟာ ဆိုရင် "Let Me In Thailand အမည်နဲ့ ထိုင်းဖက်မှာ ရိုက်ကူးနေတာပါ ။ ဒီထဲမှာ ထိုင်းအမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြီး သူတို့ကို ကြည့်ကောင်းအောင် ပြုပြင်စေပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားရဲ. နာမညျကြျော ခှဲစိတျပွုပွငျမှုလကျရာ တီဗီအစီအစဉျတဈခုဟာ ဆိုရငျ "Let Me In Thailand အမညျနဲ့ ထိုငျးဖကျမှာ ရိုကျကူးနတောပါ ။ ဒီထဲမှာ ထိုငျးအမြိုးသမီးတှဟော ဒီအစီအစဉျမှာ ပါဝငျပွီး သူတို့ကို ကွညျ့ကောငျးအောငျ ပွုပွငျစပေါတယျ။
လက်ရှိအစီအစဉ်မှာ ထိုင်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို ပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့ လက်ရာဟာ အံ့မခန်းနဲ့ လူတိုင်းကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မေ့းစေ့ပျောက်သလောက် ဖြစ်နေပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မေးရိုးတွေစောင်းနေတာပါ ။ ဒါကို တောင်ကိုရီးယားမှာ ပြုပြင်ပေးခဲ့တာပါ။
လကျရှိအစီအစဉျမှာ ထိုငျးအမြိုးသမီးနှဈဦးကို ပွုပွငျပေးလိုကျတဲ့ လကျရာဟာ အံ့မခနျးနဲ့ လူတိုငျးကို ပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈသှားစခေဲ့ပါတယျ။ ဒီထဲမှာ အမြိုးသမီးတဈဦးက မေ့းစပြေ့ောကျသလောကျ ဖွဈနပွေီး နောကျတဈယောကျကတော့ မေးရိုးတှစေောငျးနတောပါ ။ ဒါကို တောငျကိုရီးယားမှာ ပွုပွငျပေးခဲ့တာပါ။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ. မပြုပြင်ရသေးမှီနဲ့ ပြုပြင်ပြီး လက်ရာတွေကို ပုံတွေထဲမှာ ကြည့်လိုက်ပါဦး ။
တကယ်ရှိခဲ့ကြတဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ မျိုးနွယ်ဆန်းတွေရဲ့နောက်ခံသမိုင်းနှင့် စွမ်းအားများအကြောင်း
လူရိုင်းများနဲ့ DJ SODA ကသွားတာ ရေရေလည်လည် မိုက်
ယခင်က ဂျပန်အပြာဇာတ်ကာေးတွမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးတာကို သိသွားလို့ ဘဏ်ကနေ အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး
သင်အများပြည်သူသုံး အိမ်သာတို့ အ၀တ်လဲခန်းတို့ ဒီလိုချိတ်မျိုးတွေ့ရင် ချက်ချင်းသာပြေးထွက်ခဲ့ပါ
အလန်းစား ကောင်မလေးတွေရဲ. ရယ်စရာအခိုက်အတန့် ဟာသဓါတ်ပုံ (၂၀)